Gebze Halkalı Daqiiqado Furitaanka Marmaray Line | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGebze Halkalı Marmaray Line waa daqiiqado si loo furo
2013, Gebze waxay samaysay safarkeedii ugu dambeeyey waxaana la rajeynayaa sanado badan oo xiiso leh. Halkalı Khadka Marmaray wuxuu maanta ka furmayaa 11.00 iyadoo ka qayb galaysa Madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan. Furitaanka khadka tareenka, oo la xiray oo ku saabsanaa 6 sano ka hor, ayaa dib loo dhigay muddo dheer. Gebze Halkalı xariiqa, daqiiqadii hore 185 ee 76 km Gebze-Halkalı Habka 115 uu u socdo daqiiqado. Gebze-Halkalı Muwaadiniinta, saacadaha 1 waxay heli doonaan wakhti 10.
WAA MAXAY XAALADAHA GEBZE HALKALI MARMARAY LINE?
MASHRUUCA WAXAA LAGU DHALO
Mashruuca Tareenka High Speed ​​Train ee Ankara-Istanbul iyo dib-u-cusboonaynta ayaa ka shaqeynaya khadka la qorsheeyey in lagu daro Marmaray, gawaarida ayaa la burburiyey, xarumahaas oo badanaa waxay lahaayeen taariikhda taariikheed ee taariikheed, ayaa sidoo kale la cusbooneysiiyay. Muddada dhismaha waxaa la qorsheynayaa in lagu dhammaystiro bilaha 24 waxaana loogu talagalay in lagu soo afjaro shaqada dayactirka bisha June ee 2015. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda, oo qaadatay dhismaha muddada ku-meel-gaadhka ah, ayaa shaqada joojisay bishii Oktoobar ee 2014, iyada oo ka dhigtay kororka sicirka badan. Ka dib markii dhibaatooyinka la xaliyay, shaqadu waxay mar kale bilowday sanad-dugsiyeedka 2015.
XADGUDUBKA LAYSKA WAXAA LAGA QAADAYAA XADIISKA XANUMADA
Dhammaan kaabayaasha iyo saldhigyada waxaa lagu dhisay qayb ka mid ah mashruuca, taas oo yarayn doonta masaafada u dhexeysa labada laynka laga bilaabo daqiiqado 185 illaa 115. Waddada 2, 27, wadada 29 hoosteeda, 21, wadada 12, 19 buundada gudbinta iyo 60 culus ayaa dib loo dhisay. Khadka ayaa la filayaa inuu qaato rakaabka 170 million oo maalintii ah.
T1 saldhigga Sirkeci Kabataş- Khadadka taraamyada Bağcılar iyo marinnada badda,
M4 xarunta Eylul Fountain Kadıköy-Tuzla metro line,
İçmeler xarunta M4 Kadıköy-Waxaa lagu rakibi doonaa khadka metrooga Tuzla.
Marmaray'a 2013'da dhexdhexaadinta buuxda, daqiiqado ayaa bilaabi doona safarro
Daqiiqadaha aadka u ba'an ee BUDO Ferry
Marmarayin Gebze-Halkalı marxaladda hoose ee 2017
Bariga Xiriirinta Khadka Cusub ee Cusub ee Magaalada Galbeedka